Gianluigi Buffon: “Waxaan Ka Baqayaa In Aan Kubada Cagta Ka Fariisto” – Gool FM
(Juventus) 16 Maajo 2018. Goolhaayaha kooxda Juventus Gianluigi Buffon ayaa shaaca ka qaaday inuu ka cabsi qabo inuu go’aansado ka fariisashada ciyaarista kubada cagta, iyo dhibaatooyinka uu kala kulmi karo hadii ay sidaas dhacdo.
Buffon ayaa loogaga fadhiyaa inuu qabto shir jaraa’id Khamiista bari ah, si loo ogaado waxa uu doonayo inuu sameeyo hadii uu go’aansado inuu ciyaaraha ka fariisto ama uu ciyaaro sannad kale.
“Daacad uma hadli doono haddii aan ku iraahdo kama baqanayo ka fariisashada kubada cagta, maalinta aan ka fariisto kubada cagta waxaan isku dayi doonaa inaan raadsado wado kale si aanan u dareemin niyad jab”.
“Waxaan noqon doonaa mid mashquul badan, dhibaatada kaliya aan qabo ayaa ah in nolosheyda ay ahayd mudo 23 sano mid isku toosan, subax kasta waxaad heleysaa jadwal, laakiin marka aadan heysan mudo dhan 24 sac wax shaq ah waa dhibaato”.
Halyeyga reer Argentina ee Diego Maradona oo loo magacaabay Guddoomiyaha cusub ee Koox ka dhisan Yurub… + SAWIRRO